Golaha Shiinaha ee alaabooyinka dhammaaday iyo soosaarayaasha alaabada nus dhammaadka ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | P&Q
Warshadda shirarka ee P&Q waxay u guurtay Haining oo ka timid Songjiang, Shanghai. Kaliya saacadaha 1.5 ee ku socda xafiiska P&Q Shanghai. Markii hore warshadani waxay ujeeddadeedu ahayd inay dhammeystirto galka laambadda oo dhan oo ay u dhinto iskuxirka qaybaha qaybaha. Aqoon isweydaarsigeenu wuxuu naga caawin karaa inaan xakameyno horumarka golaha oo dhan, iyo waqtiga hogaaminta.
Cinwaan faahfaahsan sida soo socota:
No. 11 Dhisme • Maya. 8 Haining Avenue • HAINING, JIAXING • 314400 Shiinaha
Iyada oo qayb ka ah adeegyada silsiladda dhammaadka-dhamaadka ee ay siiso soo-saareyaasha, P&Q waxay qaban kartaa shirar ballaaran oo kala duwan, laga soo bilaabo shirar fudud oo laba qaybood ah illaa shirar adag. Nidaamyada hubinta tayada ayaa jira si loo hubiyo tayada joogtada ah ee gole kasta.
P&Q waxay bixisaa been abuur iyo shirar isdaba joog ah oo loo sameeyay si ay ula kulmaan tilmaamaha shaqsiga iyo dulqaadka qayb kasta iyo macaamil kasta. Macaamiisha waxay ku tiirsan yihiin P&Q si ay u go'aamiyaan wax soo saarka ugu waxtarka badan iyo habka isku imaatinka, ka dibna soo saaraan qaybaha oo ay maareeyaan geedi socodka silsiladda oo dhan, oo ay ku jiraan maareynta alaabada. Natiijada dhamaadka? Been abuur tayo sare leh oo joogto ah iyo shirar.
Faa'iidooyinka Golayaasha wax soo saarka
● Qaybo ayaa la keenaa iyada oo diyaar ah in la isticmaalo
Efficiency Waxsoosaarka waxsoosaarka oo kordhay
Times Waqtiyada leedhka oo hooseeya
Waqti iyo lacag dhigasho
Lies Shirar fudud ama adag
Qalabka la isticmaalay ee Golayaasha
Birta Awoodda leh
Kulan, xirxirnaan & quudhsiga
Sida lagu caddeeyay heerarka aan qabanno; ISO 9001, P&Q ayaa soo wada uruurin doona, xirxiraya, diri doona oo maareyn doona qeybta dhameystiran ama kalasooca heerka ugu sareeya. Waxaan hubineynaa in alaabadaada loo geeyo khadkaaga wax soo saar si sax ah habka iyo waqtiga aad ugu baahan tahay.
Hore: Bir xaashi
Xiga: Ku dhinta nalka aluminium bulkhead